Diarin’ny Fiarahamonina: Manabe Olontsotra Mpanao Gazety Avy Amin’ny Fotony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 5:47 GMT
Tetikasa efa 3 taona ny Kalam, mba hahitana tanora avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ao Kolkata ho lasa mpanoratra mahay mamorona sy mpandinika mpanadihady no sady hanaitaitra ny fahatsiarovantena ara-kolotsaina. Hetsika ho an'ny tanora hitakian'izy ireo ny zony amin'ny fiainany amin'ny alàlan'ny fanoratana ny tantarany manokana, ny fiarahamoniny, ary ny tontolony araky ny hitan'ny masony. Manasongadina an'izany ny fanambaràny:
Nanampy azy ireo nametraka ny “Diarin'ny fiarahamonina” ny fanampiana ara-bola avy amin'ny Rising Voices, izay mampianatra ny tanora fadiranovana mipetraka amin'ireo tanàna mahantra (ambany tanàna) ao Kolkata mba ho lasa olontsotra mpanao gazety. Hitarika atrikasa momba ny saina tia manadihady, fanoratana gazety, teknolojian'ny haino aman-jery ary media vaovao tahaky ny bilaogy, podcast sns… ry zareo. Araky ny tolokevitran'ny tetikasany:
Fantaro ireo olona ao ambadikin'ny Diarin'ny Fiarahamonina (sy Kalam): Bishan Sammadar, Harleen, Sahar Romani, Rohini, ary Maitrayee (sary etsy ambony avy any ankavia mankany ankavanana)
Ekipanà mpampianatra miaraka amin'ny Urbi Bhadhuri sy Bna Dalui izay notsongaina avy amin'ny dingana fifanentanana nandaniana fotoana ela be.
Faly ny tenanay milaza aminareo fa rehefa vita ilay dingana lavabe nametrahana ny rafitra avy amin'ny mpitantana, mankeny amin'ireo mpiara-miombona antoka, ny mpiaramonina, nanomboka ihany ny andiàna atrikasa mandritra ny 15 herinandro nony farany ny Diarin'ny Fiarahamonina. Nanomboka ny 26 Novambra 2007 ny atrikasa iarahana miasaa amin'ny fikambanana tsy miankina ao an-toerana, Sanlaap izay hatao ao amin'ny Lisea Bow Bazzar ao Kolkata. Tanora 15 mipetraka ao an-toerana ny mpandray anjara izay notsongain'ny Sanlaap, fikambanana tsy mitady tombony ara-bola manampy ireo ankizy vavy noararaotina ara-nofo tao amin'ireo faritra mena ao Kolkata, Paraganas 24 Atsimo sy Atsinanana, miaraka amin'ny trano fialofana ho an'ny tanora sy fiofanana arak'asa. Manana fandaharanasa fampivoarana ny ankizy avy amin'ireo faritra mena ao Kolkata izy io no sady misy fikambanana mpanohana ho an'ireo vehivavy mpampanofa vatana ihany koa.
Vakio eto ny momba an'ireo mpandray anjara, ny Mpanao Gazetin'ny Fiarahamonin'ny Bow Bazaar, vondrona mavitrika-nà tanora vao misandratra miaraka amin'ny fanahy lehibe sy fahazotoana.
Fametrahana andianà fanontaniana tamin'ireo mpandray anjara ny dingana voalohany:
Namaly ireo mpandray anjara:
Ny famenoana ny mombamomba ireo mpandray anjara no natao tamin'ny andro faharoa tao amin'ny Bow Bazaar, mamorona sarintany manokana misy azy ireo sy ny Bow Bazar.
Fijerena ary fisarihana ny fahatsapàna (feo, fofona, hazavana, kasika) ny Bow Bazaar teny amin'ireo mpandray anjara no hita tamin'ny andro telo. Nasaina nisafidy toerana mana-tantara teo amin'ny tanàna ry zareo ary milaza izay antony maha-zavadehibe azy io ho azy ireo.
Mba asio maso ny Bilaogin'ny Diary (na misorata anarana aminy) mba hahazo fanavaozana vaovao avy amin'ity tetikasa tokana ity